1. Yintoni? Andizange ndizimisele ukuza Ukuza ixesha elide ngaphambi kokuchacha Mhlawumbi ukuya kwinqanaba lokucaphuka, ukucaphuka, ukungakwazi ukwenza nantoni na. Abantu abaninzi banokuba befumene ingxaki ye-hiccups. Ngamanye amaxesha kuza ngamanye amaxesha angafanelanga ukuba njalo Ukuba entlanganisweni Okanye uxoxe ngeziganeko ezibalulekileyo Okanye kwimeko apho uKaiwa eza kuzalwa Ukucinga ngako, kuyaphazamisa, kuyangana intliziyo yakho ngomsindo. Kodwa musa ukoyika Namhlanje siyayazi indlela yokulahla ii-hiccups. Oko siqokelele ukukuxelela ukuba uphephe ixhala Xa le mpawu ibuya
2. Yazi oonobangela be-hiccups ngaphambi kokuba wazi indlela yokulahla ii-hiccups zakho. Kufuneka kubekho unobangela. Nawuphi na umntu owenza into enokuthi akwazi ukukhathalela kunye nokuthintela olu phawu lucaphukisayo? I-Hiccup ibangelwa yimeko yokuphazamiseka ngesiquphe kwimisipha yedayaphragm ephakathi kwesifuba kunye nesisu. Ngenxa yokuncipha Iziphumo zokuphefumla ngokukhawuleza Kodwa kwangaxeshanye, umoya ongenayo ubanjiswa yimicu yelizwi ethi ivale ngesiquphe. Ukusuka ekunciphiseni kwezihlunu zelaryngeal Ukubangela isandi se-hiccup esisenza sikhathazeke Inokwenzeka okwexeshana emva koko inyamalale, okanye kwezinye iimeko ihlale ngaphezulu kweeyure ezingama-48. Ukusela kakhulu Yitya ukutya ngokukhawuleza, musa ukukuhlafuna kakuhle okanye utye iziqholo, ukuqumba. Inokubangelwa kukudakumba okanye utshintsho ngesiquphe kubushushu obangela ukuba umzimba uhlengahlengise ngesiquphe.
3. Iindlela ezi-5 zokulahla ii-hiccups Kwaye aluchaphazeli umzimba Nabani na o hiccups rhoqo Namhlanje sifumana indlela ekhuselekileyo nelula. Okubaluleke ngakumbi, ayichaphazeli umzimba ukuba ushiye omnye nomnye.
4. Thatha amanzi okusela abandayo okanye ugalele amanzi abandayo. Oku kuyakuvumela ukuba uphefumle ngakumbi ngokusela ikomityi enkulu yamanzi abandayo, kwaye amanzi aya kunceda nezihlunu ezithintela ukuphefumla kwakho zivuleke kwaye ziphumle, kodwa cotha kancinci usele ubambe umphefumlo wakho emva kokuba uphumle. Ukulala ebusuku ukunqanda ukukrwitshwa.
5. Bamba umphefumlo wakho ixesha elifutshane ngokubala ukuya kuthi ga kwishumi ngokucotha Oku kuyafana nendlela yokuqala. Emva kokubamba umphefumlo wakho Siya kuba nakho ukuphefumla ngokupheleleyo. Unokunceda ekunciphiseni iimpawu zobusuku.
6. Yitya ukutya okumuncu, ukutya okuswiti njengecezu lelamuni okanye ibhloko yeswekile, le yenye indlela yokunceda izivamvo zakho zihlale ziphaphile. Ukususela kwintetho yokutya Ngaphandle kokubangela nayiphi na ingozi
7. Mema umhlobo ukuba abangele ukothuka Xa kusothusa, umzimba uphefumla ngokukhawuleza. Kwaye izihlunu zolula zisothusa ngokukhawuleza
8. Ukuphunga okanye ukudala iimpawu zokuthimla Oku kusivumela ukuba siphefumle ngokunzulu kwaye ukuthimla kunceda isisu sediyaphragm kunye nemibhobho yomoya ukuba isetyenziswe.
9. Ukuba la manyathelo akhankanywe apha ngasentla akakalahleki Kwaye kwaqhubeka ii-hiccups ngaphezulu kweeyure ezingama-48, kuya kufuneka ndibone ugqirha amayeza kunye nonyango ukuze afumane unobangela Njengoko benditshilo, lonke uphawu lunemvelaphi yalo. Kwaye ukuhlala ixesha elide, njengomzimba, kuthumela iimpawu zokulumkisa ukuba kufuneka siqiniseke ukuba sikwicala elikhuselekileyo.